Nkeji Ikpeazụ: A ga-enwe Curlọ Na Obodo 15 na ngwụsị izu: Nkọwapụta oge ị ga-eji mejuputa iwu na Satọdee na Sọnde, Mee 14-30, 31 na Minista ime, obodo 2020 mepere emepe na Zonguldak. [More ...]
Nkeji Ikpeazu: E wepụrụ ụfọdụ usoro Coronary: Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan kwuru nkwupụta dị mkpa mgbe ọgbakọ ndị isi gachara. Onye isi ala Recep Tayyip Erdogan nwere ozi ndị na-esonụ banyere mkpebi ọhụụ e mere gbasara ntiwapụ nke Coronavirus [More ...]
N’ikwupụta nkwupụta mgbe ọgbakọ ndị isi ahụ gasịrị, Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan kwuru nkwupụta dị mkpa banyere mmachi ahụ metụtara ụmụ amaala anyị tụrụ anya na gafere afọ 65. Nkọwa ndị a dị ka nke a: Ala ala dịka nke Ngalaba Ahụike siri kọwaa. [More ...]
Onye isi ala Recep Tayyip Erdogan, onye kwuru okwu mgbe nzukọ ụlọ ọrụ ahụ kọchara, na-ekwupụta na a na-enyocha ihe ndị a na-eme na mpaghara Koranavirus na ebuli oke ụfọdụ. Ihe kacha mkpa n’ime mmachibido ndị a bụ mmachi obi a na-egbochi mmadụ ime njem n’abali 1 June 2020 [More ...]
Eskişehir OSB Njikere maka Nnwale Covid-19
N'ime nkwupụta nkwonkwo ha, Eskişehir OSB Onye isi Nadir Küpeli na onye isi oche Metin Saraç kwuru na ha dị njikere maka nnwale Covid-19 na-aga na Eskişehir. Nkọwa; Ihe nyocha Covid-19, nke a malitere ime na OIZs na Kocaeli na Ankara, [More ...]
Nchịkwa na Nchịkwa Ọrịa Hycuene nke 19 sitere na TSE ruo ndị nrụpụta ọrụ
Ndị ọkachamara nke Standlọ Ọrụ Turkey Standards Institute (TSE) bụ ndị ntụzi aka ha, nke a ga-abụ ntụzi aka na ọgụ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na Covid-19. Ntụziaka ahụ na-enye ịdị ọcha na [More ...]
Maka ụmụ amaala dị afọ 65 na karịa, ndị amachibidoro ịpụ ogologo oge, ọ dịkarịa ala otu sitere na Tọzdee, Mee 21, na 09.00: XNUMX pm na Tọzdee, Mee XNUMX, kwekọrọ na nkwenye nke Kọmitii Sayensị na ntuziaka Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan. [More ...]
Amachibidoro njem njem obodo n'ihi nje CoVID-19. E wepụta ọkwa ọhụrụ ụnyaahụ, ebe ụmụ amaala chọrọ ka mmachibido iwu kwụsị ngwa ngwa o kwere mee, ekwuputala oge mmachi nke njem njem ahụ ga-akwụsị. [More ...]
Daysbọchị ole ka ọ bụ n’usoro Eid? N’ime Nkwa Ndị A? Ahịa na Atụrụ ga-emeghe?
Arebọchị ole na ole fọdụrụ maka Eid al-Fitr. N'oge ezumike ahụ, a ga-etisa ụbọchị izu 4. Ihe oriri, ahịa, ndị na-ere achịcha na ebe a na-eme achịcha ga-emeghe n'oge oriri? Mpaghara ndị a machibidoro mmachibido iwu ahụ? N'ime ime [More ...]
Ọdịda akụrụ na otu ụzọ n’ụzọ atọ nke ndị na-agwọ Coronavirus
Dabere na nchọpụta, ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị ọrịa gwọbara nje Corona na New York, nwere nsogbu akụrụ. Edere ya na pasent 15 nke ndị a nwere ọgwụgwọ ọrịa. Nchoputa di ajuju, New [More ...]
A na-eme ntinye 1000 nke oge 3 nke e-Government 1 TL nkwado ọrịa. Akwụghachi ego nke 2 na nke abụọ nke ego enyemaka maka ndị nọ na mkpa. Nkọwa etu esi etinye maka usoro enyemaka mmadụ na-elekọta mmadụ 3 TL [More ...]
Minista Ahụike Koca Na-ekwu ma na-adọ aka ná ntị ntiwapụ n'okpuru nchịkwa
Onye Minista Ahụike Fahrettin Koca kwupụtara nkwupụta mgbe nzukọ kọmitii sayensị nke coronavirus na nzukọ ọgbakọ vidiyo gasịrị. Ndị ozi minista, kwuru na nkwupụta, atụmatụ ya kemgbe mmalite nke ntiwapụ nke ọrịa ahụ, yana ihe ohuru na usoro iji gwọọ Turkey [More ...]
Onye Minista Azụmaahịa Ruhsar Pekcan “Na oge a chọrọ nkwekọrịta ụwa niile na akwa akwa na akwa akwa, a gaghị achọ ọnọdụ ikike maka mbupụ maka akwa eji ọtụtụ eji eme ihe.” Minista Azụmahia Ruhsar Pekcan kwuru, “Akwa [More ...]
Onye Minista nke Industrylọ Ọrụ na Teknụzụ Mustafa Varank rụtụrụ aka na ngwa eji eme ihe ọhụrụ, nke bụ usoro ọzọ maka usoro PCR maka ịchọpụta mmalite Covid-19, tupu ọrịa egosiputa ngwa a. [More ...]